म्याक प्रयोग गरी बाहिरी हार्ड ड्राईभमा आईफोनका तस्विरहरू कसरी आयात गर्ने आईफोन समाचार
के तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले तपाईंको फोटोहरूको जगेडा बचत गर्दैनन्? गुगल फोटो वा आईक्लाउड सिncing्क जस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्दैन? के तपाईं सबै फोटोहरू बाह्य हार्ड ड्राइभमा राख्न चाहनुहुन्छ? ठीक छ, केहि सरल चरणहरूको साथ - र केहि मिनेटमा - तपाईंसँग बाह्य डिस्कमा तपाईंको सबै फोटोग्राफहरूको प्रतिलिपि हुनेछ तपाईको म्याक कम्प्युटरको साथ मानक आएको एक अनुप्रयोग प्रयोग गरेर।
सामान्यतया, जब सम्म तपाईं स्वचालित सुरूवात असक्षम गर्नुहुनेछ, जब तपाईं आफ्नो आईफोन वा आईप्याडलाई तपाईंको म्याक कम्प्युटरमा जडान गर्नुहुन्छ, iPhoto सीधा खुल्दछ। यदि तपाईं आफ्नो सबै फोटोहरू तपाईंको कम्प्युटरको आन्तरिक हार्ड ड्राइभमा निर्यात गर्न चाहनुहुन्छ भने अगाडि जानुहोस् र आयात क्लिक गर्नुहोस्। जहाँसम्म, यदि तपाईं आफ्नो फोटो लाइब्रेरीलाई बाह्य डिस्कमा होस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले "छवि क्याप्चर" अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुपर्दछ (तपाईं यसलाई अनुप्रयोग फोल्डरबाट वा Launchpad बाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ)।
जारी गर्नु अघि हामी तपाईंलाई यो कार्यका लागि दुबै सेवा दिनेछौं फोटोहरू हार्ड डिस्कमा हस्तान्तरण गर्नुहोस् जस्तै USB स्मृति, म्याकको आन्तरिक हार्ड डिस्क, इत्यादि। तर सुरु गरौं:
आईफोनलाई म्याकको USB पोर्टमा जडान गर्नुहोस्
तपाईले देख्नुहुनेछ कि छवि छवि क्याप्चर साइडबारमा देखा पर्दछ र तपाईले कम्प्युटरको मेमोरीमा भण्डार गरेका सबै छविहरू स्क्रिनमा देखा पर्नेछ। त्यो याद गर्नुहोस् दुबै फोटोग्राफ र स्क्रीनशटको साथसाथै छविहरू पनि देखा पर्नेछन् जुन तपाईंले व्हाट्सएप इत्यादिद्वारा प्राप्त गर्नुभयो।.
छवि क्याप्चरको फेदमा यसले यन्त्रमा भएका छविहरूको संख्या र आयात गन्तव्य सूचित गर्दछ
गन्तव्य बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र "अन्य ..." को लागि खोजी गर्नुहोस्। यो यहाँ छ जहाँ तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुने बाह्य हार्ड ड्राइभ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं सबै फोल्डर छविहरू निर्दिष्ट फोल्डरमा आयात गर्न चाहानुहुन्छ
एक पटक गन्तव्य छानिएको छ, तपाईं मात्र गर्न पर्छ «Import» बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र केही मिनेटमा तपाईंसँग आफ्नो छविहरूको ब्याकअप प्रतिलिपि हुन्छ र तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको आईफोन वा आईप्याडको आन्तरिक मेमोरीबाट मेटाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईफोनबाट बाहिरी हार्ड ड्राइभमा म्याक प्रयोग गरी फोटोहरू कसरी आयात गर्ने
र यो विधिको साथ फोटो सिर्जनाको मिति सुरक्षित गरिएको छ?
किनभने फोटोबाट यसलाई निर्यात गर्नु जहिले पनि सुरक्षित हुँदैन
प्रयोगकर्ता १ भन्यो
उत्कृष्ट, म हेर्दै थिएँ र यो उत्तम थियो, मलाई थाँहा थिएन कि यो मार्ग अवस्थित छ। सबै ठीक छ र मेरो photos००० फोटोहरू ब्याक अप गरियो।
User1 लाई जवाफ दिनुहोस्
ती 5,००० फोटोहरू पठाउन कति समय लाग्छ? म यसमा छु र आधा दिन भन्दा बढी भएको छ
Sair लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद !! अन्तमा एक सरल विधि
फोटो अनुप्रयोगको साथ, मैले तिनीहरूलाई कम्प्युटरमा र त्यसपछि हार्ड डिस्कमा हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो ... १२,००० फोटोहरू हुनु असम्भव कार्य थियो।
यस तरीकाले एक क्लिकको साथ यो पहिले नै समाधान गरिएको छ।
भिविलाई जवाफ दिनुहोस्
ती 12,००० फोटोहरू पठाउन कति समय लाग्छ? म यसमा छु र आधा दिन भन्दा बढी भएको छ
म यस जस्तो प्रयास गर्दछु र छवि क्याप्चर अनुप्रयोगमा मैले आईफोनमा अनब्लक देख्छु, र म जारी राख्न सक्दिन .. के यो तपाईं कसैलाई भएको छ?
उत्कृष्ट टिप! छिटो र सजिलो। बाह्य हार्ड ड्राइवहरूमा ब्याक अपका लागि उत्तम। म्याक फोटो अनुप्रयोगको साथ, म सक्दिन किनकि यसले तिनीहरूलाई सीधा कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्‍यो र भन्यो कि यसलाई थप ठाउँ चाहिन्छ।
म कसरी लामो समय को लागी सोचिरहेको छु। जानकारीका लागि धेरै धन्यबाद! यसले पूर्णतया मेरो सेवा गर्‍यो
यसले मेरो लागि काम गर्दैन, म अरूलाई र मेरो बाह्य हार्ड ड्राइव राख्छु तर यसले कम्प्युटरमा पठाउँदछ
इस्मालाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद! यसले तस्बिरबाट कहिले पनि काम गरेको थिएन, या त मैले यसलाई विन्डोजबाट गरेको थिए (मसँग नियमित पहुँच छैन) वा यो मेरो मोबाइलमा टकट्यो ... मसँग पहिले नै १,18.000,००० फोटोहरू थिए! धेरै उपयोगी।
Eryl97 लाई जवाफ दिनुहोस्
म गर्न भन्यो
सबैभन्दा पहिले, सुझावका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, मेरो मामलामा यो धेरै मद्दतकारी छ किनकि म्याक र आईफोनसँग १० बर्ष भन्दा बढी समय भइसक्यो, फोटोहरूको विषयले अझै पनि मेरो प्रतिरोध गर्दछ :) तिनीहरूले यसलाई अझ सहज बनाउनुपर्दछ, मेरो विचारमा!
फोन जडान गर्दा यसले मलाई बताउँछ कि मसँग १ 1900 ०० आईटमहरू छन् जब वास्तवमा मसँग 6000००० छ, कसैलाई किन थाहा छ ????
योआलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, प्रक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लामो समयदेखि मैले यो स्थानान्तरण गर्नको लागि सजिलो तरीका खोज्दै थिएँ र यो असम्भव देखिन्थ्यो। अब म मेरो म्याकमा फोटो एपीपी मार्फत जानु बिना नै मेरो फोनमा ठाउँ बचत गर्न सक्छ।
म तिमीलाई माया गर्छु, धन्यवाद
एप्पल जस्ता कम्पनीहरूले लगानी सहज पार्न चीनले आफ्नो कर प्रणाली सुधार गर्दछ